Xukuumadda oo si toos ah u eedeysay Qoor Qoor oo daahiyay magacaabidda guddi laga sugayay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 16 June 2021
Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ugu baaqay Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor inuu soo magacaabo liiska xubnaha Galmudug ee laga sugayo muddada todobaadka ah.
Afhayeenka xukuumada Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa bartiisa Facebook waxa uu soo dhigey qoraal kooban oo uu ugaga hadlayo soo gudbinta guddiyada farsamada oo aan illaa iyo hadda uusan maamulka Galmudug gudbin.
Qoraalka afhayeenka ayaa u qornaa sidan hoose ku qoran;
“Dowlad-goboleedyada inta badan wey u soo gidbiyeen Ra’iisul Wasaaraha liiska wax ka baddelka Guddiyada Doorashooyinka ee dib loo eegay. Waxaa weli laga war dhowrayaa Dowlad Goboleedka Galmudug oo ah Dowlad Goboleedka kaliya ee aan weli soo dirin. Maadaama waqtigu uu soconayo, shacabka Soomaaliyeedna ay doonayaan in la dardargaliyo howlaha hirgalinta doorashooyinka ayaa Ra’iisul Wasaare Rooble iyo guddiga heer Wasiir ee uu magacaabay waxa ay ka codsanayaan Madaxweyne Ahmed Cabdi Kaariye inuu si dhaqso ah u soo gudbiyo liiska xubnaha Galmudug ee laga sugayo muddada todobaadka ah.”